बिहान सबेरै किन उठ्ने ? यस्ता छन् कारणहरु — Sanchar Kendra
सबैलाई थाहा छ, समयमै सुत्ने र समयमै उठ्ने गरेमा यसले स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । तर यो थाहा पाउँदापाउदै धेरैले अल्छिका कारण यसो गर्दैनन्।समयमा सुत्ने वा उठ्ने नगरे व्यक्तिको दैनिकी खराब हुनुका साथै विभिन्न रोगहरु लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
यसो नगरे मानसिक रोग, मोटोपन, आलस्यता, मुटुसम्बन्धी समस्या हुने गर्दछ । अझ दिनभरीको थकानले शरीरलाई हानी पुर्याइहेका बेला यसबाट बच्न पनि समयमै सुत्ने र उठ्ने गर्नुपर्छ ।
यस्तो छ, बिहान सबेरै उठ्नुका फाइदा :
बिहान चाँडै उठ्दा शुद्ध हावा पाइन्छ । जसले फोक्सोलाई स्वस्थ राख्छ ।, सबेरै उठ्दा पाइने शुद्ध अक्सिजनले शरीरलाई स्वस्थ्य राख्दछ ।, बिहानै चाँडै उठे व्यायाम गर्न समय हुन्छ ।, बिहान सबेरै उठेर व्यायाम गरे हृदय रोगको सम्भावना कम हुन्छ ।
बिहान सबेरै उठेर व्यायाम गरे शरीरमा रक्तसञ्चार सही हुन्छ ।, बिहान सबेरै उठ्ने मानिसमा मानसिक रोगको समस्या कम हुन्छ ।, चाँडै उठ्नाले काम गर्नकालागि समय धेरै मिल्दछ ।
यस्तै मानिस स्वस्थ्य रहन र ताजापन महशुस गर्न राति मिठो निन्द्रा लाग्न आवश्यक छ । निन्द्रा लागेर मात्र हुदैँन निन्द्रा पर्याप्त हुन पनि आवश्यक छ । तर आजकल मानिसलाई हतपत निन्द्रा पर्दैन । त्यसैले उनिहरु बेडमा पल्टिएपनि निकै बेरसम्म सुत्ने कसरत गर्छन् । त्यसो भए राति सहज रुपमा निदाउन के गर्ने त ?
सुत्नुअघि टिभी नहेर्ने
धेरै मानिसहरु राति सुत्नु भन्दा अघि टेलिभिजन हेर्ने गर्दछन् । तर यस्तो बानीले निन्द्रा बिथोल्ने गर्दछ । त्यसैले सकेसम्म यो बानीलाई छाड्नु पर्दछ ।
अबेरसम्म जागा नरहने
धेरै मानिसहरु राति बेडमा सुतेर फोनमा व्यस्त हुने गर्दछन् । जसका कारण उनीहरु राति अबेरसम्म जागा हुने बानी पर्दछ । तर यस्तो बानीले निन्द्रा पर्न दिदैँन । त्यसैले यो बानीलाई तत्काल त्याग्नु पर्दछ ।
सुत्ने र उठ्ने समय निश्चित पार्ने
सुत्ने र उठ्ने समय निश्चित गर्दा पनि मिठो निन्द्रा लाग्ने गर्दछ । त्यसैले राति सुत्ने र बिहान उठ्ने समय निश्चित पार्नु पर्दछ ।
राति चिया वा कफी नपिउने
राति सुत्नुअघि चिया वा कफी पिउनु हुदैँन । यी दुबै पेय पदार्थमा यस्ता तत्व पाइन्छन् जसले उत्तेजना बढाउँछ र निन्द्रा गायब गरिदिन्छ ।
योग गर्दा शरीरले आराम पाउँछ । साथै तनाव कम गर्दछ । जसले तपाईंलाई मिठो निन्द्राको लागि सहयोग पुर्याउँछ । यदि अबेर रातीसम्म निन्द्रा नलागेमा यी उपाय अपनाउनु पर्दछ ।
अबेर रातिसम्म निन्द्रा नपर्ने समस्या भएमा सुत्ने कोठा एउटै पार्नुहोस् ।, निदाउन प्रयोग गरिने कोठामा बस्ने, पढ्ने वा छलफल गर्न बन्द गर्नुहोस् ।, रातमा सुत्नुअघि कोठाको वातावरण शान्त र अध्यारो पार्नुहोस् ।, सम्भव र अनुकुल महशुस भए आखाँ छोपेर सुत्नुहोस् ।, मोबाइल, टेलिभिजन वा आवाज आउने यन्त्र अफ गरेर सुत्नुहोस् ।
सुत्ने डसना धेरै मोटो वा बिझाउने गरी पातलो हुनु हुदैन ।, विवाहिताहरुले सुत्नुअघि शारीरिक सम्बन्ध राखे निदाउन सघाउ पुर्याउँछ ।, सुत्ने समयलाई निश्चित गर्नुहोस् साथै उठ्ने समय पनि एउटै पार्नुहोस् ।, निन्द्रा पर्न खोजेन भने किताब पढ्ने, सुमधुर गीत, धुनहरु सुन्नु उपयुक्त हुन्छ ।, बेलुकीको खानामा चिल्लो, पिरो नखानुहोस् ।
दिउँसोको खाजापछि कफी नखानुहोस् ।, अनिन्द्रा निराशाको रोग अर्थात डिप्रेसनसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले अबेरसम्म निन्द्रा नलागेमा डिप्रेशनको रोगको सुरुवाती लक्षण हुनसक्छ । तसर्थ यसबारे चिकित्सकको परामर्श लिनुहोस् । विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा